Lahatsoratra nosoratan'i Ann Smarty
Ann Smarty no marika sy mpitantana vondrom-piarahamonina ao amin'ny Internet Marketing Ninjas ary mpanorina ny Viral Content Bee. Nanomboka tamin'ny 2010 ny asan'i Ann momba ny milina fikarohana. Izy no lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Search Engine Journal teo aloha ary mpandray anjara amin'ny bilaogy fikarohana sy sosialy malaza, anisan'izany ny Small Business Trends sy Mashable.
Araka ny filazan'ny tambajotra, Instagram dia manana mpampiasa mavitrika maherin'ny 1 miliara amin'izao fotoana izao, ary tsy isalasalana fa hitombo hatrany izany isa izany. Maherin'ny 71%-n'ny Amerikanina 18 ka hatramin'ny 29 taona no nampiasa Instagram tamin'ny 2021. Nandritra ny taona 30 ka hatramin'ny 49, 48%-n'ny Amerikanina no nampiasa Instagram. Amin'ny ankapobeny, maherin'ny 40% amin'ny Amerikanina no milaza fa mampiasa Instagram izy ireo. Tena lehibe izany: Pew Research, Fampiasana Media Sosialy amin'ny 2021 Ka raha mitady ianao
B2B: Ahoana ny fomba hamoronana fantson-drivotra mahomby amin'ny haino aman-jery sosialy
Alakamisy Febroary 17, 2022 Alakamisy Febroary 17, 2022 Ann Smarty
Ny haino aman-jery sosialy dia fomba tsara hamoronana fifamoivoizana sy fahatsiarovan-tena amin'ny marika saingy mety ho sarotra amin'ny famoronana fitarihana B2B izany. Nahoana ny media sosialy no tsy mahomby amin'ny fanompoana ho toy ny fantson'ny varotra B2B sy ny fomba handresena izany fanamby izany? Andeha hojerentsika izany! Fanamby amin'ny famoronana fitarihana amin'ny haino aman-jery sosialy Misy antony roa lehibe mahatonga ny sehatra media sosialy ho sarotra ny hivadika ho fantsona miteraka fitarihana: Miato ny fivarotana media sosialy - Tsia